४५ जिल्लामा मतदान सुरु ! - Nepali Online News Media-shikharnews.com - shikharnews.com
४५ जिल्लामा मतदान सुरु !
काठमाडौं, मंसिर २१ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको दोस्रो चरणको निर्वाचन बिहीबार ४५ जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रहरुमा मतदान सुरु भएको छ । मतदाताहरु विहानैदेखि मतदानका लागि लाइन बसेका थिए । सात बजेदेखि मतदान सुरु भएको हो ।
दोस्रो चरणमा प्रतिनिधिसभाको १ सय २८ र प्रदेशसभाको २ सय ५६ सिटका लागि मतदान हुँदै छ । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फको कुल १ सय ६५ सिट मध्ये ३७ र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको कुल ३ सय ३० सिटमध्ये ७४ सिटमा मंसिर १० गते पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ ।
दोस्रो चरणको मतदान सकिएपछि बिहीबारबाटै पहिलो र दोस्रो चरणको मतगणना प्रारम्भ हुनेछ । पहिलो चरणमा हिमाली तथा पहाडी ३२ जिल्लामा निर्वाचन भएको थियो । यतिबेला तराईका सबै र पहाडका जिल्लाहरुमा मतदान हुन लागेको छ । प्रमुख दलका अधिकांश शीर्ष नेताहरु दोस्रो चरणकै चुनावमा प्रतिस्पर्धी छन् ।
काठमाडौं आउँदै गरेको बस दुर्घटना, १६ जना घाइते
अब जेलभित्र कैदीका गतिविधि यसरी निगरानी गरिंदैछ